Cameron Markway - Kulliyadaha Hore ee Colorado
Jadwal ballanta ballanta
Cameron wuxuu ka shaqeynayay waxbarashada tan iyo 2013, markii ugu horeysay ee uu qabto jago caawiye macalinimo iyo macalin Ingiriis ah Jaamacadda Waqooyiga Colorado. Wuxuu ka soo shaqeeyey la-taliye tacliin iyo xirfadeed ee CECP ilaa 2017. Isaga oo si dhow ula shaqeynaya ardayda iyo qoysaska ka soo kala jeeda asal ahaan kala duwan, Cameron wuxuu bartay sida looga caawiyo ardayda inay la kulmaan baahidooda shaqsiyeed iyadoon loo eegin himilooyinkooda mustaqbalka. Wuxuu ku faraxsan yahay inuu sii wado caawinta ardaydiisa inay u koraan aqoonyahanno iyo dad ahaanba. Cameron wuxuu haystaa BA iyo MA oo Ingiriis ah kana qaatay Jaamacadda Waqooyiga Colorado.
CEC Parker, Maamulka CECP, La talinta CECP